Nitsidika An’i Maria ny Anjely Gabriela | Tena Finoana
“Intỳ Aho Mpanompovavin’i Jehovah!”
1, 2. a) Ahoana no niarahaban’ilay vahiny an’i Maria? b) Nahoana i Maria no sahiran-tsaina?
TAITRA i Maria nahita an’ilay vahiny tonga tao an-tranony. I Maria mihitsy no notadiaviny fa tsy hoe ny rainy na ny reniny! Hitany hoe tsy avy ao Nazareta izy io, satria kely ilay tanàna ka tonga dia fantatra izay olona tsy avy ao. Sady tena hafa ity vahiny iray ity! Hafakely koa ny fomba niarahabany an’i Maria. Hoy izy: “Arahaba, ry ilay ankasitrahana indrindra. Jehovah momba anao.”—Vakio ny Lioka 1:26-28.
2 Izany no zava-nitranga voalohany tantarain’ny Baiboly momba an’i Maria. Zanak’i Hely izy, ary nipetraka tao Nazareta any Galilia. Efa fofombadin’i Josefa izy. Olona nanam-pinoana i Josefa. Tsy nanan-karena anefa izy satria mpandrafitra. Efa azoazon’i Maria an-tsaina àry hoe hanao ahoana ny fiainan’izy roa. Hifanampy foana izy sy Josefa na amin’ny mora na amin’ny sarotra, ary hiara-mitaiza ny zanany. Tonga tampoka anefa ilay vahiny, ka nanome azy andraikitra avy amin’Andriamanitra. Sahiran-tsaina àry i Maria satria toa tsy ho araka ny nieritreretany azy indray ny fiainany.
3, 4. Inona ny zavatra diso ampianarin’ny fivavahana momba an’i Maria, ary inona kosa no hifantohantsika?
3 Gaga angamba ianao fa tsy dia miresaka momba ny fiaimpiainan’i Maria sy ny toetrany ny Baiboly, ary na ny bika aman’endriny aza tsy voalaza mihitsy. Ahafantaran-javatra be dia be momba azy ihany anefa izay voaresaka ao.
4 Betsaka ny zavatra diso ampianarin’ny fivavahana momba an’i Maria. Maro, ohatra, no manao sary hoso-doko sy sarivongana, lazaina fa i Maria. Misy aza mampianatra fa “Renin’Andriamanitra” na “Mpanjakavavin’ny Lanitra” izy, nefa izy vehivavy tsotsotra kely. Tsy hiresaka an’ireny anefa isika, fa hifantoka amin’izay tena lazain’ny Baiboly momba azy. Nanam-pinoana izy, ka modely ho antsika.
5. a) Inona ny toetran’i Maria hitantsika eto? b) Inona no ianarantsika avy amin’izany?
5 Tsy olombelona ilay nitsidika an’i Maria, fa ny anjely Gabriela. Taitra be i Maria rehefa nantsoiny hoe “ilay ankasitrahana indrindra.” (Lioka 1:29) Lasa ny sainy hoe fa iza no nankasitraka azy. Izy mantsy tsy nanantena hoe tena hankasitraka be azy ny olona. Nanazava ilay anjely fa i Jehovah no nankasitraka azy. Marina fa tena tiany izany, nefa nanetry tena izy ka tsy nirehareha hoe efa ankasitrahan’Andriamanitra. Ary ahoana isika? Tsy tokony hatoky tena be isika hoe efa ankasitrahan’i Jehovah, na dia tena miezaka manompo azy aza. Andriamanitra mantsy manohitra ny manambony tena, fa tia sy manampy ny manetry tena.—Jak. 4:6.
Nanetry tena i Maria ka tsy nirehareha hoe efa ankasitrahan’Andriamanitra
6. Inona ilay tombontsoa miavaka nomena an’i Maria?
6 Nila nanetry tena tokoa i Maria, satria nomena tombontsoa miavaka. Nanazava ilay anjely fa hitoe-jaza izy, ary io zaza io no ho ambony indrindra amin’ny olon-drehetra. Hoy i Gabriela: “I Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan’i Davida rainy. Ary ho mpanjaka eo amin’ny taranak’i Jakoba mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany.” (Lioka 1:32, 33) Efa fantatr’i Maria fa nampanantena an’i Davida i Jehovah, arivo taona mahery talohan’io, hoe hanjaka mandrakizay ny iray amin’ny taranany. (2 Sam. 7:12, 13) Io ilay Mesia nandrasan’ny vahoakan’Andriamanitra hatry ny ela. Hay i Maria no hiteraka azy!
Nilaza ny anjely Gabriela fa nomena tombontsoa miavaka i Maria
7. a) Inona no hitantsika avy amin’ny Lioka 1:34? b) Inona no azon’ny tanora ianarana avy amin’izany?
7 Nilaza koa ilay anjely fa “hantsoina hoe Zanaky ny Avo Indrindra” ilay zaza. Olombelona ve anefa dia hiteraka Zanak’Andriamanitra? Sady ahoana koa moa no hahabevohoka an’i Maria nefa izy sy Josefa aza mbola tsy mpivady? Nanontany àry i Maria hoe: “Ahoana no hetezan’izany, nefa izaho tsy nanao firaisana tamin-dehilahy?” (Lioka 1:34) Hitantsika eo fa tsy menatra i Maria hoe mbola virjiny, ary sarobidy taminy mihitsy aza izany. Tanora maro anefa izao no maika erỳ hanao firaisana, ary maneso an’izay mbola virjiny. Niova tokoa ny toe-tsain’ny olona. I Jehovah kosa tsy mba miova. (Mal. 3:6) Ankasitrahany foana izay manaraka ny fitsipiny, toy ny tamin’ny andron’i Maria ihany.—Vakio ny Hebreo 13:4.
8. Ahoana no hahafahan’i Maria hiteraka zaza lavorary nefa izy tsy lavorary?
8 Tsy lavorary i Maria, na dia tsy nivadika tamin’Andriamanitra aza. Ahoana àry no hahafahany hiteraka zaza lavorary? Hoy i Gabriela: “Ho tonga aminao ny fanahy masina ary ny herin’ny Avo Indrindra hanaloka anao. Izany no antony hiantsoana an’ilay haterakao hoe masina, Zanak’Andriamanitra.” (Lioka 1:35) Ny hoe masina dia “tsy misy loto” na “tsy misy tsiny.” Hanao fahagagana àry i Jehovah mba ho masina sy lavorary ilay zaza. Hafindrany ao an-kibon’i Maria ny ain’ilay Zanany any an-danitra, ary hampiasa ny fanahy masina izy mba “hanaloka” an’i Maria, izany hoe hiaro an’ilay zanany tsy handova ota. Nino ny tenin’i Gabriela ve i Maria?
Nino ny tenin’i Gabriela izy
9. a) Nahoana no diso hevitra izay manakiana ny tantaran’i Maria? b) Ahoana no nanaporofoan’i Gabriela hoe tena azo inoana ny teniny?
9 Misy milaza hoe virjiny ve dia hiteraka. Na ny teolojianina sasany ao amin’ny Fivavahana Milaza Azy ho Kristianina aza miteny an’izany. Tokony mba hoe mahay Baiboly ry zareo, nefa fampianarana tsotra dia tsy azony. Inona izany? Hoy i Gabriela: ‘Tsy hisy tsy ho tanteraka izay lazain’Andriamanitra.’ (Lioka 1:37) Natoky ny tenin’i Gabriela i Maria satria tena nanam-pinoana. Olona nisaina tsara koa anefa izy, ka tsy tonga dia nino befahatany. Nila porofo ampy tsara izy aloha. Nanome porofo àry i Gabriela ka nilaza fa bevohoka koa i Elizabeta, havan’i Maria. Fahagagana ilay izy, satria momba i Elizabeta sady efa be taona.
10. Nahoana no sarotra sy nampatahotra ny andraikitr’i Maria?
10 Inona àry no hataon’i Maria? Fantany fa hanatanteraka izay rehetra nolazain’i Gabriela Andriamanitra. Fantany koa fa sarotra ilay andraikitra nankinina taminy, na dia tena miavaka aza. Efa fofombadin’i Josefa mantsy izy, ka tsy maintsy ho niady saina raha hanambady azy ihany i Josefa, rehefa mahalala hoe bevohoka izy. Nampatahotra koa anefa ilay andraikitra satria ilay zavaboary tsy foin’Andriamanitra indrindra sady Zanany malalany no hoentiny ao an-kibony. Tena mila karakaraina koa ilay zaza rehefa teraka, ary mila arovana foana. Andraikitra be tokoa izany!
11, 12. a) Inona no nataon’ny lehilahy sasany, na dia natanjaka sy nanam-pinoana aza izy ireo? b) Inona no hitantsika avy amin’ilay tenin’i Maria?
11 Tantaraina ao amin’ny Baiboly fa na lehilahy natanjaka sy nanam-pinoana aza niahotra, rehefa nomen’Andriamanitra andraikitra sarotra. Rehefa nasain’Andriamanitra nisolo tena azy, ohatra, i Mosesy, dia nanda ka niteny hoe tsy nahay nandaha-teny. (Eks. 4:10) I Jeremia koa nilaza fa “mbola zaza”, ka tsy hahavita ny asa nanirahana azy. (Jer. 1:6) I Jona aza nandositra mihitsy! (Jona 1:3) Ahoana kosa i Maria?
12 Hoy izy tamin’i Gabriela: “Intỳ aho mpanompovavin’i Jehovah! Enga anie ho tanteraka amiko izany araka ny teninao!” (Lioka 1:38) Tena hita hoe nanetry tena sy nankatò izy, ka na isika efa atỳ aoriana be atỳ aza mbola mahalala ny teniny. Ny ‘mpanompovavy’ mantsy no olona ambany indrindra, ary niankina tanteraka tamin’ny tompony ny fiainany. Toy izany mihitsy no niheveran’i Maria ny tenany. Fantany fa afaka nanankina tanteraka ny fiainany tamin’i Jehovah izy, satria tsy mivadika amin’izay tsy mivadika aminy i Jehovah. Fantany koa fa hahazo fitahiana izy, raha miezaka mafy manao an’ilay andraikitra.—Sal. 18:25.
Fantatr’i Maria fa afaka nanankina tanteraka ny fiainany tamin’i Jehovah izy, satria tsy mivadika i Jehovah
13. Ahoana no hanahafantsika an’i Maria rehefa sarotra na toa tsy ho vitantsika ny zavatra ampanaovin’i Jehovah antsika?
13 Mety hihevitra isika indraindray hoe mangataka zavatra sarotra sy tsy ho vitantsika mihitsy Andriamanitra. Manome antsika porofo maro anefa izy ao amin’ny Teniny hoe afaka matoky azy isika. (Ohab. 3:5, 6) Hanahaka an’i Maria àry ve isika, ka hanankina tanteraka ny fiainantsika amin’i Jehovah? Hamaly soa antsika izy amin’izay, ka vao mainka isika hino azy.
Nitsidika an’i Elizabeta
14, 15. a) Inona no nataon’i Jehovah mba hanatanjahana ny finoan’i Maria? b) Inona no ianarantsika momba an’i Maria, rehefa jerena ny Lioka 1:46-55?
14 Nampahery an’i Maria ny tenin’i Gabriela momba an’i Elizabeta. Fantany mantsy fa i Elizabeta no tena hahatakatra izay mahazo azy, satria mitovitovy ny zavatra mitranga amin’izy roa. Lasa haingana àry i Maria nankany Joda, tany amin’i Elizabeta sy Zakaria vadiny. Be tendrombohitra tany sady telo na efatra andro ny dia. Vao tonga i Maria, dia nanome porofo hafa hanatanjahana ny finoany i Jehovah. Nibitaka ny zaza tao an-kibon’i Elizabeta, raha vao niarahaba i Maria. Feno fanahy masina i Elizabeta tamin’izay, ka niantso an’i Maria hoe “renin’ny Tompoko.” Nampahafantarin’Andriamanitra azy fa ilay zanak’i Maria no ho Tompo na Mesia. Noderainy koa i Maria satria nanam-pinoana sy nankatò. Hoy izy: ‘Sambatra ianao fa nino.’ (Lioka 1:39-45) Tsy maintsy ho tanteraka àry izay rehetra nolazain’i Jehovah tamin’i Maria!
Mpinamana be i Maria sy Elizabeta ka nifampahery
15 Ahoana hoy i Maria? Noraketin’Andriamanitra tsara ao amin’ny Baiboly ny teniny. (Vakio ny Lioka 1:46-55.) Io no teniny lava indrindra ao, ary ahalalan-javatra betsaka momba azy. Nidera an’i Jehovah izy, satria nataony renin’ny Mesia. Hita àry fa nahay nankasitraka izy. Nilaza koa i Maria hoe mampietry ny mpirehareha sy ny manana fahefana i Jehovah, fa manampy ny olona ambany sy mahantra maniry hanompo azy. Midika izany fa tena nanam-pinoana i Maria. Nahay tsara ny Soratra Masina koa izy. Voalaza mantsy fa nampiasa andinin-teny 20 mahery avy ao amin’ny Soratra Hebreo izy! *
16, 17. a) Inona ny porofo fa nanetry tena i Maria sy ny zanany ka modely ho antsika? b) Mampahatsiahy antsika inona ny tantaran’i Maria sy Elizabeta?
16 Hita tokoa fa nisaintsaina tsara ny Tenin’Andriamanitra i Maria. Nanetry tena anefa izy, ka ny hevitra tao ihany no nolazainy fa tsy izay fahazoany an’ilay izy. Nanetry tena toa azy koa ilay zanany rehefa lehibe, ka niteny hoe: “Tsy ahy ny fampianarako, fa an’ilay naniraka ahy.” (Jaona 7:16) Modely ho antsika tokoa i Maria. Mieritrereta àry hoe: ‘Tena hajaiko ve ny Tenin’Andriamanitra ka ampiasaiko, sa aleoko ihany ny hevitro?’
17 Nijanona telo volana teo ho eo tany amin’i Elizabeta i Maria, ary azo antoka fa tena nifampahery izy ireo. (Lioka 1:56) Mampahatsiahy antsika izany fa sarobidy ny namana. Handroso ara-panahy sy hifandray kokoa amin’i Jehovah isika, raha olona tena tia azy no ataontsika namana. (Ohab. 13:20) Inona anefa no holazain’i Josefa rehefa tonga any aminy i Maria?
Maria sy Josefa
18. Inona no noresahin’i Maria tamin’i Josefa, ary inona no nataon’i Josefa vokatr’izany?
18 Azo inoana fa tsy niandry ny kibony ho hita i Maria vao niresaka tamin’i Josefa. Fantany fa tena tsotra sy tsara fanahy ary natahotra an’Andriamanitra i Josefa, nefa asa izy raha hino azy. Notantarainy taminy ihany anefa ny zava-drehetra. Niady saina be i Josefa, ka azo inoana fa nalahelo i Maria. Mba te hino an’ilay olon-tiany i Josefa, saingy tena sarotra inoana ilay izy ka nihevitra izy fa nijangajanga i Maria. Tsy lazain’ny Baiboly mivantana izay tao an-tsainy, fa ny voalaza ao dia hoe tapa-kevitra ny hisaraka izy, ary fisarahana ara-dalàna mihitsy satria toy ny efa mpivady ny mpifamofo tamin’izany. Tiany hatao mangingina anefa ilay izy mba tsy ho afa-baraka ilay fofombadiny. (Mat. 1:18, 19) Tsy nanome tsiny azy mihitsy anefa i Maria tamin’izany rehetra izany.
19. Ahoana no nanampian’i Jehovah an’i Josefa?
19 Tsy navelan’i Jehovah hisaraka tamin’i Maria i Josefa. Nisy anjely niteny taminy tamin’ny nofy hoe fahagagana no nahabevohoka an’i Maria. Maivamaivana erỳ i Josefa nandre izany, ary nanaraka ny toromarik’i Jehovah, toy ny efa nataon’i Maria. Nanambady an’i Maria izy, ka niomana hitaiza an’ilay Zanak’i Jehovah. Andraikitra lehibe ny niandry azy!—Mat. 1:20-24.
20, 21. Nahoana i Josefa sy Maria no modely ho an’ny mpivady sy izay mikasa hivady?
20 Efa 2 000 taona izay no lasa, nefa mbola modely ho an’ny mpivady sy izay mikasa hivady i Josefa sy Maria. Hitan’i Josefa fa nahay nitaiza sy nanao tsara ny andraikiny ny vadiny. Faly àry izy hoe nanoro hevitra azy ny anjelin’i Jehovah mba tsy hisaraka amin’i Maria. Hitany koa fa tena ilaina ny miantehitra amin’Andriamanitra rehefa handray fanapahan-kevitra lehibe. (Sal. 37:5; Ohab. 18:13) Azo antoka fa mbola tsara fanahy sy nitandrina foana izy tatỳ aoriana, rehefa nanapa-kevitra momba ny fianakaviany.
21 Ary ahoana ny amin’i Maria? Nanaiky hanambady an’i Josefa izy fa tsy tezitra taminy. Na dia tsy nino azy aza i Josefa tamin’ny voalohany, dia tsy maimaika hanao zavatra izy. Navelany hanapa-kevitra tsara aloha i Josefa satria izy no ho loham-pianakaviana. Modely ho an’ny vehivavy kristianina àry i Maria. Nandray lesona koa izy mivady tamin’iny zava-nitranga iny hoe ilaina ny mifampiresaka tsara sy amim-pahatsorana.—Vakio ny Ohabolana 15:22.
22. Nahoana ny tokantranon’i Josefa sy Maria no tsara fiandohana, ary nanao ahoana ny fiainany?
22 Tsara fiandohana ny tokantranon’izy roa, satria samy tia an’i Jehovah ry zareo sady te hampifaly azy ka vonona hitaiza tsara ny zanany. Nanao ahoana ny fiainan’izy ireo? Nahazo fitahiana be dia be ry zareo, nefa niatrika zava-tsarotra maro koa. Tsy toy ny zaza rehetra mantsy ilay notezainy, fa ilay ho lasa lehilahy niavaka indrindra teto an-tany.
^ feh. 15 Mety ho nampiasa ny tenin’i Hana, ohatra, izy. Notahin’i Jehovah koa mantsy i Hana ka nomeny zanaka.—Jereo ilay efajoro hoe “Vavaka Roa Tena Miavaka”, Toko 6.
Nahoana ny tantaran’i Maria no mampianatra antsika hanetry tena?
Nahoana isika no milaza fa tena mora nankatò i Maria?
Inona avy no nataon’i Maria mba hanatanjahana ny finoany?
Inona no tianao hotahafina amin’i Maria?
Renin’Andriamanitra ve i Maria?
Ny tantaran’ny fivavahana kristianina sy ny Soratra Masina no ahitana raha tena marina izany na tsia.
Hizara Hizara “Intỳ Aho Mpanompovavin’i Jehovah!”
Tafavoaka Ihany i Maria na Mafy Aza ny Nanjo Azy
Inona no Ianarantsika avy Amin’i Maria?